Korea Avaratra - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Korea avaratra)
Repoblika demôkratika entim-bahoakan'i Korea ((mg))
Praiministra Demokrasia entim-bahoaka
Anaran'ny mponina Koreanina avaratra
Fiozao ny ora UTC +8:30
Ny Korea Avaratra, na Repoblika demôkratika entim-bahoakan'i Korea, dia firenena mivelatra any avaratra ny tanjona koreanina any avaratra atsinanan' Azia.
Ny Korea Avaratra dia mizara sisin-tany amin'i Sina izy (1416 km) any avaratra, amin'ny Rosia any avaratra atsinanany (19 km) ary amin'ny Korea Atsimo (238 km). Ny faritraha misy ny sisin-tany Korea avaratra-Korea Atsimo dia anisan'ny faritra be mpiambona indrindra eto an-tany : iray tapitrisa mahery ny isan'ny olona miambona io sisin-tany io.
Ny anarana fohy ny Korea Avaratra dia Puk Chosŏn, amin'ny fanoratana Hangul 북조선 ; amin'ny fanoratana Hanja 北朝鮮 ; hita koa amin'ny media koreanina Atsimo Buk Han amin'ny fanoratana Hangul : 북한 ; amin'ny fanoratana Hanja : 北韓.
Ny anarana lava ny Korea avaratra dia « Repoblika entim-bahoakan'i Korea » (RPDC, Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, fanoratana Hangul : 조선민주주의인민공화국 ; fanoratana Hanja : 朝鮮民主主義人民共和國).
Ny anarana ofisialy « Chosŏn » (Korea, na « Tanin'ny Maraina ») any Korea Avaratra dia avy amin'ny anaran'ny dinastia farany nanjaka talohan'ny fanafihan'ny Japoney, ny dinastian'ny Ri na Choson (1392-1910). Any Korea Atsimo, ny anarana ofisialy dia « Hanguk », midika « firenen'ny (guk) Han », anarana foko prehistôrika nipetraka tany antsimon'ilay tanjona. Ny fiavian'ny anarana « Korea » indray dia avy amin'ny dinastia Koryŏ nanjaka tany korea tamin'ny 918 hatramin'ny 1392. « Korea » dia avy amin'ny fiovam-bika ara-baninteny italiana tamin'ny eoropeana tonga tany Azia tamin'ny taonjato faha 15. Nanome corio, coria ary corea.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Korea_Avaratra&oldid=815221"
Dernière modification le 14 Aprily 2018, à 17:21